Depiote 73 : Hanangon-tsonia hanesorana ireo minisitra HVM -
AccueilRaharaham-pirenenaDepiote 73 : Hanangon-tsonia hanesorana ireo minisitra HVM
16/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy tanteraka ilay diabe niarahan’ireo depiote 73 sy ireo vahoaka etsy amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna Analakely, nihazo ny Lapan’i Mahazoarivo omaly. Nambaran’ny depioten’i Soanierana Ivongo, Tody Arnaud, tetsy Analakely fa tsy mety ny fandehanana eny amin’ny Lapan’ny praiminisitra eny Mahazoarivo satria mety hampiteraka korontana. « Aleo aloha hilamina ary mijanona eto an-kianja ihany isika manohy ny tolona », hoy ity depiote ity.
Nambara tamin’ireo vahoakan’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ihany koa tamin’izany fa hetsika fanangonan-tsonia amin’ireo sendikan’ny mpiasa no hotanterahina manomboka anio.
Raha ny voalaza, dia hisy ny fanangonan-tsonia ataon’ireo sendikan’ny mpiasa eny anivon’ireo departemanta amin’ny hanaseroana sy hanalana ireo minisitra avy amin’ny antoko HVM rehetra. Nambaran’izy ireo hatrany fa tsy mitondra fitoniana eto amin’ny firenena velively ny fanendrena ireo minisitra HVM efa nitana toerana sy nitantana minisitera, anefa mbola notazonina ho ao anaty governemanta ihany, saingy ny sasany amin’izy ireo nafindra minisitera hafa fotsiny ihany fa tsy nesorina sy nosoloina olona hafa.
Ankoatra izay, notsindrian’ireo depiote 73 na koa depiote ho an’ny fanovana ireo fa tsy mijanona intsony ny tolona, ary mihamafy hatrany raha tsy misolo sy miala amin’ny toerany ireo depiote HVM ireo.
Marihina mantsy fa ahitana ireo sendikan’ny mpiasa maro eny amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny tanàna manamafy ny tolona tarihin’ireo solombavambahoaka ho an’ny fanovana. Misy amin’izy ireo no tsy manaiky mihitsy ny hitantanan’ny olona hafa ivelan’ny tontolo misy azy ireo hitantana ilay minisitera. Izany hoe, olona tsy mahafehy sy manana traikefa amin’ilay sehatra tantaniny akory no napetraky ny Fitondrana ho eo. Izany indrindra no mahatonga ny hetsika sendikaly sy ny fanangonan-tsonia, indrindra amin’ny fanesorana ireo minisitra HVM rehetra tsy ho mpikambana eo anivon’ny governemantan’ny marimaritra iraisana.
Taona 2017-2018 : Dokotera fito nigadra
Isan’ny maha be resaka ireo manana tsy fahasalamana eny anivon’ny hopitaly ny fitavozavozana sy ny tandrevaka ataon’ireo mpitsabo, indrindra ireo eny amin’ny hopitalim-panjakana. Mazana ireo manan-katao ihany no karakaraina tsara fa tsy misy miraharaha ireo ...Tohiny
TAFA-PIFIDIANANA : MAP2 : Tena hampandroso ny firenena tokoa – Orlando Robimanana kandidà 35
Hery Rajaonarimampianina : Kandidà